DHAGEYSO:Maxaa keenay in Al-Shabaab ay u Hanjabaan Dalladaha Waxbarashada Soomaaliya? | xushmo.com
DHAGEYSO:Maxaa keenay in Al-Shabaab ay u Hanjabaan Dalladaha Waxbarashada Soomaaliya?
Published on October 7, 2018 by xareed · No Comments
Al-shabaab ayaa soo saaray Digniin ku socota Daladda Waxbarashadda Soomaaliya waxayna Sheegeen in ay talaabo ka qaadi doonaan Daladii ku dhagi adeegto la shaqaynta Dowlada Faderalka ah ee Soomaaliya.
Warbaahinta Al-shabaab ayaa baahiyay Cod laga duubay Afhayeenka guud ee Al-shabab Sheekh Cali Maxamuud Raage Cali dheere oo hadalkiisa ku soo qaaday Digniintiisa Daladaha waxbarashadda oo uu sheegay in ay bixiyaan manaahij Ubadka lagu barayo Afkaar Islaamka ka soo horjeedda.
Cali dheere waxaa uu sheegay in ay Al-shabaab ay ka warqabaan Tilaabooyin ay qaadeen Daladaha Waxrashadda ee ku yaala Mudqisho, wuxuuna hadalkiisa kusoo qaaday in ay tilaabo ka qaadi doonaan ciddii aan digniinta u hogaansamin.
Afhayeenka Al-shabaab ayaa waxaa uu soo hadal qaaday Manhajka cusub ee dhawaan Dowladda Soomaaliya ay sheegtay in laga dhigayo Dugsiyadda oo ay diyaarintiisa ka qayb qaadatay Hay’adda QM u qaabilan Waxbarashadda iyo Dhaqanka ee UNESCO.